Myat Shu - 2011 February
You are here : Myat Shu » Archives for February 2011
Published By Myat Shu On Sunday, February 27th 2011. Under ၀တ္ထု
ကိုယောနှင့် မိမိတို့ကား အိမ်ထောင်သက် ၇ နှစ်ရှိ၍ သားကလေး အပါမှာ ၆ နှစ်သား ရှိခဲ့ပြီ…။ “သြော် .. မိန်းမ မိန်းမ… မင်းတို့ကတော့ ရှင်ဘုရင်၊ ခင်ခင်မင်မင် တသက်လုံး ခိုင်းဖို့ မင်းတို့စိတ်က မြင်” “ဆိုပြန်ပြီ ဒီသီချင်းကြီး ဘာလဲ၊ ဘယ်သူက ဘာခိုင်းလို့လဲ” “မဟုတ်ဘူးလား မိမိရယ်၊ မင်းတို့ မိန်းမတွေ လှလှပပ ၀တ်ရေး စားရေးအတွက် ဒီက ကိုယောတို့မှာ တနေ့လုံး နွားလိုရုန်း…” “တော်စမ်းပါ… ကိုယောတို့က တနေ့လုံး ရုန်းနေရတော့ အိမ်က အလကား ထိုင်နေရလို့လား။ တနေ့တနေ့များ အားရတယ် မရှိဘူး။ ရှင်တို့ ယောက်ျားတွေ ပြောနေလို့လဲ နားလည်မှာ မဟုတ်ဘူး” “ဒါတော့ မိမိကို ကိုယောက ... Continue Reading
ဆယ်စုခေတ် တနှစ်စွန်း မန်းသင်္ကြန် (၉)
Published By Myat Shu On Sunday, February 27th 2011. Under ဆောင်းပါး
( ... တခါတုန်းက ရေကစားရမှာကို ရှက်ခဲ့ဘူးသော လူတယောက် အဘယ့်ကြောင့် ရေမက်၍ နေပါသနည်း။) ဤဆောင်းပါး အစဉ်သည် လူတို့၏ ပြောင်းလဲတတ်သော သဘောတွင် ကျွန်တော်သည်လည်း မည်သို့မည်ပုံ ဆယ်နှစ်ဆယ်မိုးအတွင်း အရေခွံ အမျိုးမျိုး လဲခဲ့ရသည်ကို ပြညွှန်လိုသည့် ရည်ရွယ်ချက် တခုလည်း ပါရှိပါ၏။ ကျွန်တော်သည် တခါက ရေကြောက်သူ ဖြစ်ခဲ့၏။ ယခုအခါတွင်မူ ရေပွဲကို နွှဲဆင်သူ ဖြစ်နေပြန်၏။ နောင် ဘယ်သောအခါတွင် ရေပွဲတွေမှ ကွင်းရှောင်ကာ ဘုရားသွား ကျောင်းတက် တရားဖက်ကာ နေလိမ့်မည် မသိချေ၊ လောကတွင် မတည်မြဲသော တရားကို နာကြား သိရှိခဲ့ရပါလျက် တည်မြဲရန် အဖန်ဖန် ကြိုးစားနေရသည်။ သံသရာ စက်ဝန်း အတွင်း၌ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Tuesday, February 22nd 2011. Under ၀တ္ထု
သူတို့ ရပ်ကွက်၏ တေးသံသာ ပေါင်းစုံကို မနက်ခြောက်နာရီ လောက်ကတည်းက စတင် ကြားရတတ်သည်။ သူကတော့ နေဖင်ထိုးမှအိပ်ရာထတတ်သူမို့ အရှေ့ပိုင်း အစီအစဉ် တစ်ချို့ကို မမီတတ်၊ သို့သော်လည်း အသံ လှိုင်းတွေက ပြင်းလွန်းလှ သည်မို့ တော်တော်ဝေးဝေးက လွှင့်လျှင်ပင် နှစ်ထပ်အိမ် အပေါ်ထပ်၏ နောက်ဖေးအခန်း ထဲ၌ ကွေးအိပ်နေတတ်သော သူ၏ မနက်ခင်းပိုင်း အိပ်မက်တွေထဲထိ လာပြီးနှောက်ယှက် တတ်လေသည်။ သူကလည်း ပုံမှန်ထချိန် မဟုတ်လျှင် ဘာအသံပဲ ကြားကြား ထကို မထတတ်။ အဲ .. ညောင်နာနာ အသံကို ဆွဲဆွဲငင်ငင်နှင့် '' နွားနို့ … ကြိုပြီးသားပါတယ် ... အစိမ်းပါတယ် ... ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Monday, February 21st 2011. Under ဆောင်းပါး
ဆင်ခြေလျှော လမ်းလေး အတိုင်း တက်လာခိုက် စိမ်းလန်းအေးချမ်းသော အသွင်ဆောင်သည့် ပတ် ၀န်းကျင်ကို ဝေ့ကြည့်မိရင်း မောလို့မောမှန်း မသိမိ။ ပုံမှန်ဆိုလျှင် စင်္ကာပူမှာက မီးခြစ်ဆံများ ဒေါင်လိုက် ထောင်ထားသည့်နှယ့် အိုးအိမ်မှ ချပေးသော အဆောက်အအုံများ၊ တိုက် နီးနားဝန်းကျင်တွင် အပန်းဖြေစရာ ကစား ကွင်းများ၊ ပန်းခြံများ၊ ခုံတန်းများနှင့် ပြည့်နှက်နေချင် နေတတ်သည်။ မြို့ထဲဘက် သွားလျှင်တော့ တခြား မြို့ပြများသဖွယ် မိုးထိလု အဆောက်အအုံများ၊ လူနှင့် ကားများဖြင့် ရှုပ်ထွေးနေမည်မှာ မလွဲ... ယနေ့ ကျွန်မရဲ့ခရီးသွား စာအုပ်(ပတ်စ်ပို့) သက်တမ်းတိုးရမည်မို့ ပုံမှန် ကျင်လည်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွေဖီကာ နာမည်ကျော် အောချတ်လမ်း အဆုံး ဆိတ်ငြိမ်ရပ်ကွက်ထဲရှိ ပြည်ထောင်စု ... Continue Reading
ဆယ်စုနှစ် တခေတ်စွန်း မန်းသင်္ကြန် (၈)
Published By Myat Shu On Sunday, February 20th 2011. Under ဆောင်းပါး
(အင်း.. သည် အသက်အရွယ် မှ နောက်ထပ် မကြီးတော့ပဲ သည်မျှနှင့် ရပ်တန့်နေပြီး ထာဝစဉ် ပျိုနေလျှင် မည်မျှ ကောင်းပါလိမ့်မည်နည်း။ ...) အရွယ်သုံးပါး နားမလည်၍မရ၊ ဘ၀ဆိုသော စက်ဝန်း လည်ပတ်ရောက်ရှိ လာသည် နှင့်အမျှ၊ မိမိသည်လည်း နုပျိုခြင်းမှ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ရမည်ကို သိလျက် အဘယ့်ကြောင့် လူ့သက်တမ်း အကောင်းဆုံးကဏ္ဍတွင် တန့်ရပ် နေချင်ပါသနည်း။ အို.. လူဆန်သော လူတို့မည်သည်မှာ ဤသို့သော ဆန္ဒ ရှိကြစမြဲပင် ဖြစ်သည်ဟု ကိုယ့်ကိုကိုယ် နှစ်သိမ့်ရသည်။ မေးဖန်များ စကားရ သွားပါများ ခရီးရောက် ဟူသော စကားရှိ၏။ တိုတောင်းလှသော လူ့ဘ၀၌ သွားဘွယ်ရာ လာဘွယ်ရာ လုပ်ဆောင်ဘွယ်ရာတွေကို အချိန်ရှိခိုက် လုံ့လစိုက်နိုင်လျှင်ပင် ... Continue Reading
ဆယ်စုခေတ် တနှစ်စွန်း မန်းသင်္ကြန် (၇)
Published By Myat Shu On Saturday, February 19th 2011. Under ဆောင်းပါး
(... အစာဟောင်းလည်း ကုန်သလောက်ရှိ လူလည်းမျော့မျော့ကလေး ကျန်တော့မှ ကျွန်တော် အိပ်ခန်းဝင်နိုင်သတည်း။ ကျွန်တော် အိပ်ရာဝင်ချိန်ကား နေထွက်ချိန် ဖြစ်လေသတည်း……။) နေမင့်ရောင်ဝါ မ၀င့်ရှာနိုင်လင့်ကစား ငါလာတော့မည် နင်သွားတော့ဟု သတိပေးနှိုးဆော်သည့်နှယ်၊ လရောင် ၀ိုးဝိုးဝါးဝါးကို ပါးလျားပျက်ပြယ်စေရန် တမန်လွှတ်သည့် အချိန်မှာ မိုးသောက်ရောင်နီ မလာမီ ဝေစီစီကာလပင် ဖြစ်မည်ထင်ပါသည်။ ပျော်ဘွယ်ဘူတာသို့ အ၀င်၌ ရှုခင်းတခုလုံးသည် ညဟူ၍လည်း မခေါ်နိုင် နေ့ဟူ၍လည်း မဆိုသာ မှုန်ပြာပြာကလေး ဖြစ်နေသည်။ ထိုသို့ မှုန်ပြာမှုန်ဝေသော ရှုခင်းအလယ်တွင် ပျော်ဘွယ်ဘူတာသည် သပ်ရပ်သန့်ရှင်းပြီး ချစ်စရာကောင်း၍ နေသည်ကို တွေ့ရလေသည်။ ကျွန်တော်တို့ စီးနင်းလိုက်ပါခဲ့သည့် အမြန်မီးရထားကြီးသည် ပျော်ဘွယ်ဘူတာတွင် ဆိုက်ရပ်ခြင်း မရှိသော်လည်း အရှိန်များစွာ ... Continue Reading
ကုလသမဂ္ဂ အထိမ်းအမှတ်နေ့များနှင့် သီတင်းပတ်များ
Published By Myat Shu On Saturday, February 19th 2011. Under အမှတ်တရ
ဇန်န၀ါရီလ (၂၇) ရက် - ဥဿုံမီးငရဲသင့်ခဲ့သူများ၏ အောက်မေ့ခြင်း အထိမ်းအမှတ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေ့ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၀) ရက် - ကမ္ဘာ့လူမှုရေး တရားမျှတမှုနေ့ (၂၀၀၉ ခုနှစ်မှ စတင်၍) ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၁) ရက် - အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မိခင်ဘာသာစကားနေ့ မတ်လ (၈) ရက် - အမျိုးသမီးများ၏ အခွင့်အရေးနှင့် နိုင်ငံတကာ ငြိမ်းချမ်းရေး ကုလသမဂ္ဂ အထိမ်းအမှတ်နေ့ (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးများနေ့) မတ်လ (၂၁) ရက် - လူမျိုးရေးဝါဒနှင့် လူမျိုးခွဲခြားရေးကို ဆန့်ကျင်သူများနှင့် စည်းလုံးညီညွတ်မှု ရက်သတ္တပတ် မတ်လ (၂၂) ရက် - ကမ္ဘာ့ရေဇလာနေ့ မတ်လ (၂၃) ရက် - ကမ္ဘာ့မိုးလေ၀သနေ့ မတ်လ (၂၅) ရက် ... Continue Reading
ရမ္မက်၏ သမီးပျိုများ (၁)
Published By Myat Shu On Saturday, February 19th 2011. Under ဘာသာပြန်
အခန်းကြော်ငြာ ပရိုင်မ်ရို့စ်ရိပ်သာထဲမှ ဆယ်ခန်းတွဲ အဆောက် အဦရှေ့တွင် အနက်ရောင် ဆိုင်းဘုတ်တစ်ခု ချိတ်ဆွဲထားသည်။ ''ပရိဘောဂ အပြည့်အစုံပါ တစ်ယောက်ခန်း တစ်ခန်း ငှားရန်ရှိသည်။ ကလေးများနှင့် တိရစ္ဆာန်များ ပါလျှင်လည်း ခွင့်ပြုသည်။'' လမ်းထဲသို့ ခပ်ဖြည်းဖြည်း မောင်းနှင်လာသည့် အမိုးဖွင့်ကား အနီရောင်ထဲမှ ကားပိုင်ရှင်အရှင် နှစ်ယောက်ခမြာ ဖုန်တသောသော ထနေသော ကားလမ်းမမှ မသဲမကွဲသာ မြင်ရသော အနက်ရောင် ဆိုင်းဘုတ်လေးကို မနည်း အားစိုက်ကြည့်နေကြရသည်။ ကားမောင်းသူနေရာမှ လူရွယ်နှင့် သူ့နံဘေးမှ မိန်းမပျိုလေးတို့က တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် စူးစူးနစ်နစ် ကြည့်လိုက်ရင်း အားပါးတရ ရယ်မောလိုက်တော့ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေရဲ့ အကြည့်က သူတို့စုံတွဲအပေါ်သို့ ပြုံကျလာသည်။ အိပ်ပျော်နေသည့် ကလေးကို လက်တွန်းလှည်းထဲ ထည့်ပြီး တွန်းလာသည့် ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Friday, February 18th 2011. Under ၀တ္ထု
တရံရောအခါ ကလောင်အမည် “ဖူးပုရစ်” အမည်ခံ စာဆိုတော်တစ်ဦးသည် မိမိ ထုတ်လတ္တံ့သော ပထမ ကျမ်းစာအုပ်အတွက် နိဂုံးကို ရေးသားနေစဉ်၊ နိုင်ငံကျော် စာရေးဆရာတစ်ဦးသည် အနီးသို့ ချဉ်းကပ်၍ “ဖူးပုရစ်” ၏ အင်္ကျီစကို ဆွဲပြီးသော် “ဟေ့ သူငယ်၊ မင့် ကဗျာတွေ ပုံမနှိပ်နှင့်လကွာ” ဟု ငေါက်ငမ်းလေသည်။ “ကျွန်တော့် ကဗျာတွေက မကောင်းလို့လား ခင်ဗျာ။” “မကောင်းဘူးလို့ ဆိုရအောင် မင့်ကဗျာကို ငါ မဖတ်ဖူးသေးဘူး လဟ။ မင့်ကဗျာကို ဖတ်လဲ မဖတ်ချင်ပေါင်ကွာ။ ကောင်းလိမ့်မယ်လို့တော့ ငါက တပ်အပ်ပြောရဲပါရဲ့။ ဒါပေမင့် ပုံမနှိပ်နဲ့လကွာ။” “ဘာကြောင့်ဆိုတာ အမိန့်ရှိပါဦး ခင်ဗျာ။” “မင့် စာတွေ ပုံနှိပ်ပြီး စာအုပ်လဲ ထွက်ကရော၊ စာဆိုတော်ကြီးလို့လဲ လူတွေက ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Thursday, February 17th 2011. Under ၀တ္ထု
သူ၏ နာမည်အရင်းမှာ နိုင်ဝင်းဖြစ်သော်လည်း တစ်မြို့လုံးကမူ သူ၏အသက်မွေးမှုဖြစ်သည့် ဘဲဥရောင်းချခြင်းကို အကြောင်းပြုပြီးသကာလ ဘဲဥဟူ၍သာ ချစ်စနိုးခေါ်ဝေါ်ကြကုန်၏။ ထိုသို့ခေါ်ဝေါ်ခြင်းအား သူ စိုးစဉ်းမျှ မကြိုက်ကြောင်းကို တစ်မြို့လုံးသိကြသော်လည်း ဘဲဥ ဟူ၍သာ ခေါ်ဆိုမြဲ ခေါ်ဆိုကြလေ၏။ ဘဲဥသည် ရှေးဟောင်းကျမ်းဂန်တို့နှင့် လက်ပွန်းတတီး ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီး၊ လူဖြစ်လာသူ ဖြစ်လေရကား ယင်းသို့ခေါ်ဝေါ်ခြင်းသည် ယဉ်ကျေးသောသူတို့၏ အလေ့မဟုတ်၊ အသက်မွေးမှု အလုပ်အကိုင်ကိုအကြောင်းပြု၍ဆဲရေးခြင်းတစ်မျိုးသာလျှင် ဖြစ်ကြောင်းကို ဘာရဒွါဇ ဇာတ်တော်အား စကားအရာ သက်သေထား၍ တုံ့ပြန်လေ့ရှိသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ တစ်မြို့လုံးကမူ ဘဲဥ ဟူ၍သာ ခေါ်ဝေါ်မြဲ ခေါ်ဝေါ်ကြဆဲပင် ဖြစ်ပြီး၊ နောင်တွင်လည်း ဆက်လက် ခေါ်ဆိုကြဦးမည်မှာ မလွဲပြီ။ အကြင် ဘဲဥသည် ပန်းချီကားများကို လွန်စွာမှပင် ခုံမင်တွယ်တာသူတစ်ဦး ဖြစ်လေ၏။ ... Continue Reading